त्रिविको १९ औं उपकुलपतिमा डा. भगवान कोइरालासहित तीन जनाको नाम सिफारिस
हाम्रोखबर शुक्रबार​, आश्वीन १७ २०७६
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । त्रिविको १९ औं उपकुलपति चयन गर्नका लागि गठित नाम सिफारिस समितिले पहिलो नम्बरमा डा. भगवान कोइराला, दोस्रोमा डा. धर्मकान्त बास्कोटा र तेस्रोमा चन्द्रमणि पौडेलको नाम सिफारिस गरेको शिक्षामन्त्रालयका उपसचिव पुष्प ढकालले जानकारी दिए ।
डा. कोइराला मुटु शल्यचिकित्सक हुन् भने डा. बास्कोटा ईएनटी विशेषज्ञ हुन् । त्यस्तै चन्द्रमणी पौडेल भने राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुन्, उनी त्रिविकै पूर्व रेजिस्ट्रार समेत थिए । स्रोतका अनुसार सुरुमा उपकुलपतिका लागि डा. कोइरालाले इच्छा नदेखाएको भनिएपनि पछिल्लो समय शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलसँग भेटघाट र छलफल भएपछि उनी सकारात्मक भएका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सिंगापुरमा उपचार गर्न जानुअघि डा. कोइरालालाई त्रिविको उपकुलपति बन्न प्रस्ताव गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए ।
तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. तिर्थ खनियाको कार्यकाल सकिनुअघि नै सरकारले नयाँ उपकुलपतिका लागि नाम सिफारिस गर्न सहकुलपति एवम् शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिले लामो समयसम्म पनि नाम छनोट गर्न नसकेपछि रेक्टर प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीलाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको थियो । हाल निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा रहेकी प्रा.डा. त्रिपाठीको नाम भने सिफारिसमा परेको छैन ।